M̀ Kwesịrị Imetakwu Ndị Enyi? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Finnish French Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Portuguese (European) Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Otu nwa okorobịa aha ya bụ Alan sịrị: “Ndị ihe na-adabara mụ na ha bụ ndị ọgbọ m. Ọ na-esiri m ezigbo ike imeta ndị ọzọ enyi.”
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Sara sịrị: “Ndị enyi m dị ole na ole, ọ dịkwa m mma otú ahụ. Abụghị m ụdị onye na-aga emeta ndị ọ na-amaghị enyi.
Ọ̀ dị gị otú ahụ ọ dị Alan na Sara? È nwere ndị ọ bụ naanị ha ka gị na ha bụ enyi, nke na ị naghị emetali ndị ọzọ enyi?
Ọ bụrụ na ọ dị gị otú ahụ, isiokwu a bụ maka gị.
Ihe ndị na-esi ná mmadụ na naanị otu ndị ịkpa apụta
E nweghị ihe dị njọ ná mmadụ inwe ndị ya na ha bụ ezigbo enyi. Ọ na-eme ka ahụ́ ruo onye ahụ ala na ya na ndị ihe na-adabara ya na ha nọ.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Karen sịrị: “Obi na-adị mmadụ ụtọ ma o nwee ndị ihe ya na-amasị na otu ndị ihe na-adabara ya na ha. Ọ na-amasị ndị na-eto eto ka ha na ndị ha ma na-akpa.
Ị̀ Maara? Jizọs na ndịozi ya iri na abụọ bụcha enyi, mana ya na mmadụ atọ n’ime ha, ya bụ, Pita, Jems na Jọn kacha akpachi anya.​—⁠Mak 9:2; Luk 8:⁠51
Mana mmadụ ihọrọ naanị otu ndị ka ya na ha na-akpa, ma na-eze ndị ọzọ eze, nwere ike ịkpata nsogbu. Dị ka ihe atụ:
O nwere ike ime ka ị ghara inwetakwu ezigbo ndị enyi ga-enyere gị aka.
Otu nwa okorobịa aha ya bụ Evan sịrị: “Ịna-emeta naanị ndị ọgbọ gị ma ọ bụ naanị ndị dị ka gị enyi ga-eme ka ị ghara ịmụta ihe n’aka ndị ọzọ.”
O nwere ike ime ka o yie ka onwe gị ò juru gị afọ.
Otu onye na-eto eto aha ya bụ Sara sịrị: “Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu ndị ka gị na ha na-akpa, o nwere ike ime ka ndị ọzọ chewe na ị naghị achọ ịtụpụrụ onye ọ bụla ọzọ ọnụ.”
O nwere ike ime ka ị na-achọ ndị ọzọ okwu
Otu nwa okorọbịa aha ya bụ James sịrị: “Mmadụ nwere ike ọ gaghị na-achọ okwu, ma ọ bụrụ na ndị ya na ha na-akpa na-achọ okwu, o nwere ike ị masiwa gị. O nwedịrị ike ịdị ya ka ihe egwuregwu.”
O nwere ike itinye gị ná nsogbu, karịchaa ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka gị na ha kpawa, ma ọ̀ dị mma ma ọ̀ dị njọ.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Martina sịrị: “Naanị otu onye na-akpa àgwà ọjọọ ezuola ime ka ndị òtù ya niile bido kpawa àgwà ọjọọ.”
Chebara ụdị onye i kwesịrị ịbụ echiche.
Jụọ onwe gi, sị: ‘Olee ụdị onye m kwesịrị ịbụ? Ndị mụ na ha na-akpa hà na-eme ka ọ dịrị m mfe ka ọ bụ ka o siere m ike ịbụ ụdị onye m kwesịrị ịbụ? M̀ ka ga-achọ ka mụ na ha na-akpa ma ọ̀ dị mma ma ọ̀ dị njọ?’
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Mkpakọrịta ọjọọ na-emebi àgwà ọma.”​—⁠1 Ndị Kọrịnt 15:⁠33.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Ellen sịrị: “Ọ bụrụ na ndị gị na ha na-akpa abụghị ụdị ndị na-akpa ụdị àgwà i kwesịrị ịna-akpa, ha nwere ike ime ka i mewe ihe ndị ị na-agaraghị eme.”
Chebara ihe ndị dị gị ezigbo mkpa echiche.
Jụọ onwe gị sị: ‘M̀ nwere ike ime ihe m kpebiri na m gaghị eme iji mee ka mụ na ndị enyi m ka na-akpa? Gịnị ka m ga-eme ma ọ bụrụ na enyi m emee ihe na-adịghị mma?’
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Ndị niile m hụrụ n’anya nke ukwuu ka m na-abara mba.”​—⁠Mkpughe 3:⁠19.
Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Melanie sịrị: “Ọ bụrụ na otu n’ime ndị enyi gị emee ihe ọjọọ, ọ ga-adị gị ka ime ka mmadụ mata gbasara ihe ahụ o mere ga-egosi na ị bụghị ezigbo enyi.”
Metakwuo ndị ọzọ enyi.
Jụọ onwe gị, sị: ‘Ò nwere uru m ga-erite ma m metakwuo ndị ọzọ m na-amaghị nke ọma enyi?’
Amaokwu Baịbụl ga-enyere gị aka: “Na-elekwasị anya, ọ bụghị naanị n’ọdịmma onwe unu, kamakwa n’ọdịmma nke ndị ọzọ.”​—⁠Ndị Filipaị 2:⁠4.
Otu nwa okorobịa aha ya bụ Brian sịrị: “O nwere ike ịbụ na ihe na-esiri ụmụaka ndị a na-eche na o nweghị onye ma ha ike n’ụlọ. Mana i metahaala ha enyi, ị ga-amata na ha bụ ndị ezigbo mmadụ.”
Isi ihe dị mkpa: O nweghị ihe dị njọ ná mmadụ inwe ndị ya na ha na-akpachi anya. Mana, ọ ga-abakwara gị uru ma ọ bụrụ na i metakwuo ndị ọzọ enyi. Baịbụl sịrị: “Onye na-emekwa ka ndị ọzọ ṅụjuo mmiri afọ ka a ga-emekwa ka ọ ṅụjuo mmiri afọ”​—⁠Ilu 11:⁠25.
“Mgbe m nọ n’ụlọ akwụkwọ, e nwere ndị òtù mụ na ha na-akpa, ma m mechara chọpụta na ha na-akpaso ndị ọzọ àgwà ọjọọ, ya emee ka m kwụsị iso ha. Ọ bụ eziokwu na o mere ka m ghara inwe ndị enyi ruo nwa oge, mana obi dị m ụtọ na m mere ihe dị mma.”​—⁠Maryam
“Ihe mere m ji eso ụfọdụ ndị m na-eso n’ụlọ akwụkwọ bụ ka a mara na m sokwa biri. Ma, m mechaara chọpụta na iso ndị ọjọọ na-akpọkọrịta ga-eme ka e were ya na onye ahụ bụ onye ọjọọ ma ọ bụ meedị ka o mewe ihe ndị ọ na-ekwesịghị ime.”​—⁠Alex
“Mgbe m nọ n’ụlọ akwụkwọ sekọndịrị, m ji ọtụtụ afọ gbalịa ime ka mụ na otu òtù ndị na-achọghị m bido kpawa. Mgbe m chọpụtara na mbọ m niile kụrụ afọ n’ala, mụ amalitezie iji ndị enyi m nwere kpọrọ ihe.”​—⁠Bethany
Otú Anyị Si Emeso Ndị Ọzọ Udo na Obi ụtọ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị Ndị Na-eto Eto
Olee Otú E Si Amata Ezigbo Enyi?
Gịnị Ka E Ji Ama Ezigbo Enyi?